laacib » Magacyada Liiska 5-ta Tabare ee Sida Ku Meel gaarka loogu Magacaabi karo Manchester United
Magacyada Liiska 5-ta Tabare ee Sida Ku Meel gaarka loogu Magacaabi karo Manchester United
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay kala hadasho Ernesto Valverde , Ralf Rangnick , Lucien Favre , Rudi Garcia iyo Paulo Fonseca si ku meel gaar ah xilka tababarenimo ee Old Trafford.
Michael Carrick ayaa haatan ah tababaraha Red Devils ka dib markii Ole Gunnar Solskjaer laga ceyriyay shaqada tababaranimo, waxaana ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe uu kooxda ku hogaamiyay inay 2-0 kaga badiyaan Villarreal kulan ka tirsan Champions League Talaadadii.
MaMauricio Pochettino ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay dooqa koowaad ee kooxda si uu u bedelo Solskjaer , laakiin waxaa laga yaabaa inuusan diyaar u aheyn ilaa xagaaga soo aadan.
Natiijo ahaan, Man United ayaa raadineysa inay magacowdo tababare ku meel gaar ah inta ka harsan xilli ciyaareedka 2021-22, sida laga soo xigtay Daily Mail , tababarihii hore ee Barcelona Valverde ayaa ku jira liiska tababarihii hore ee RB Leipzig Rangnick.
Favre, oo dhawaan maamulay Borussia Dortmund iyo Garcia, oo Lyon ku hogaamiyay semi-finalka Champions League 2019-20, ayaa sidoo kale la sheegay inay ku jiraan.
Dhanka kale, Fonseca, oo hore u joogay Roma, ayaa la sheegay inay la hadli doonto kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingariiska, doorkaas, iyadoo dhawaan ay weyday shaqooyinka Tottenham Hotspur iyo Newcastle United.
Carrick ayaa haatan isku diyaarinaya kooxda kulanka ay Axada kula ciyaari doonaan kooxda chelsea kulan ka dhici doona garoonka Stamford Bridge.